အမျိုးသမီးတိုင်း အလိုချင်ဆုံးအရာက ဘာလဲ ဆိုတာ - Store Feeling
အမျိုးသမီးတိုင်း အလိုချင်ဆုံးအရာက ဘာလဲ ဆိုတာ
အမြိုးသမီးတိုငျး အလိုခငြျဆုံးအရာက ဘာလဲ ဆိုတာ
တခါတုနျးက နိုငျငံငယျလေးတခုမှာ ငယျရှယျပွီး ထကျမွကျတဲ့ ဘုရငျတပါးနနျးတကျခဲ့တယျ……ထိုတိုငျးပွညျရဲ့ အနီးအနားမှာ အလှနျအငျအားကွီးပွီးစဈလိုလားတဲ့ ဘုရငျကွီးတပါးရှိတယျ…..ထိုဘုရငျကွီးဟာ တိုငျးပွညျငယျလေး ကိုသိမျးပိုကျခငြျပမေဲ့ဘုရငျငယျလေးရဲ့ ငယျရှယျမှုနဲ့ ထကျမွကျတဲ့ အတှေးအခေါျတှကေို သဘောကလြို့ အခှင့ျအရေးတခုပေးလိုကျပါတယျ…..အဲ့ဒီအခှင့ျ အရေးကတော့ အလှနျခကျခဲတဲ့ မေးခှနျးတခု မေးလိုကျတာပါ….
ဘုရငျငယျလေးအတှကျ အခြိနျတဈနှဈပေးထားပွီးမဖွနေိုငျပါက အသတျခံရမယျလို့ ပွောလိုကျပါတယျ….
“လောကကွီးမှာရှိတဲ့ အမြိုးသမီးတိုငျး အလိုခငြျဆုံးအရာက ဘာလဲ “အဲဒီမေးခှနျးကတော့…ဘုရငျလေးနဲ့ ပညာရှိအမတျတှကေို ခကျခဲရှုပျထှေးစေ တော့တာပါဘဲ…..တခြို့က မဖွဈနိုငျတဲ့ မေးခှနျးလို့ထငျကွတယျ……ဒါပမေယ့ျ အခြိနျတဈနှဈရဖို့အတှကျ အဖွရှောဖို့လကျခံလိုကျရတာပေါ့…..ဒါနဲ့ သူ့တိုငျးပွညျမှာရှိတဲ့ မငျးညီမငျးသားတှေ၊ဘုနျးတောျကွီးတှေ၊ ပညာရှိတှေ၊ တရားသူကွီးတှေ၊ပွညျသူပွညျသားတှနေဲ့ ပွည့ျတနျဆာအမြိုးသမီးတှပေါမကနြျ ဆင့ျခေါျပွီး အဖွရေဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျ….
ဒါပမေဲ့ ••••ပွည့ျစုံ ကြနေပျဖှယျရာ အဖွတေော့ မရခဲ့ပါဘူး….နောကျဆုံးမှာတော့ လူအမြားစုက တိုငျးပွညျမှာရှိတဲ့စုနျးမအိုကွီး တယောကျ သာလြှငျ ဒီအဖွကေို ဖွနေိုငျလိမ့ျမယျလို့ လြှောကျတငျလိုကျကွတယျ…..စုနျးမကွီးဟာ အလှနျတနျဖိုးကွီးတဲ့အဖိုးအခကိုတောငျးဆိုလိုကျပါတော့တယျ…
အဖွပေေးရမဲ့ နောကျဆုံးရကျဟာတဖွေးဖွေးနီးလာပါပွီ….စုနျးမကွီးဟာလဲ သူ့တောငျးဆိုခကြျကို အရငျလိုကျလြှောမှအဖွပေေးနိုငျမယျလို့ ဆိုပါတယျ…တောငျးဆိုခကြျကတော့ ဘုရငျလေးရဲ့ ယုံကွညျ အားအကိုး ရဆုံးသူငယျခငြျး လဲဖွဈ၊ နိုငျငံရဲ့ သူရဲကောငျးစဈဦးစီးလဲဖွဈတဲ့ အမတျကွီးကိုလကျထပျပေး ဖို့ပါဘဲ….ဘုရငျလေးလဲ အလှနျတုနျလှုပျခြောကျခြားနတောပေါ့….
စုနျးမကွီးပုံစံက ခါးကုနျးကုနျး ကြောကုနျးဘုနှင့ျအမွငျဆိုးရှားလှတယျ….သှားကလဲ ရှေ့သှား တခြောငျးထဲရှိတယျ…အနံ့အသကျကလဲ ဆိုးရှားလှတယျ…စကားအပွောအဆို ကလဲ ကွမျးတမျး ညဈညမျးလှတယျ….ထိုဆိုရှားလှတဲ့ စုနျးမကွီးနဲ့ နူးညံ့သိမျမှေ့စိတျသဘောကောငျးတဲ့ သူရဲ့ သူငယျခငြျးနဲ့ယူဖို့တိုကျတှနျးဖို့ရာမှာ သူ့အတှကျဝနျထုပျဝနျပိုးဖွဈနတောပေါ့…ဒါပမေယ့ျ အမတျကွီးကတော့ တိုငျးပွညျနဲ့ လူမြိုးအရေးနဲ့ ယှဉျရငျဒီကိစ်စဟာ သူ့အတှကျအရေးမကွီးကွောငျး ပွောဆိုပွီး စုနျးမကွီးပွောတဲ့ အဆိုကိုလကျခံပါ့မယျလို့ ဘုရငျလေးကို လြှောကျတငျလိုကျပါတယျ…
ဒီလိုနဲ့ မငျ်ဂလာပှဲအစီအစဉျကိုကွငွောလိုကျပွီးဘုရငျလေးအတှကျအဖွကေို စုနျးမကွီးကပေးလိုကျပါတော့တယျ..“လောကကွီးမှာရှိတဲ့ အမြိုးအမီးတိုငျးအမှနျတကယျ အလိုခငြျဆုံးအရာက ……သူတို့ရဲ့ ဘဝကိုသူတို့ စိတျတိုငျးကြ စီမံခန့ျခှဲခငြျတာပါဘဲ“
ထိုအခါမှ ပွညျသူတှလေဲ အဖွကေိုသိပွီးဘုရငျကွီးကလညျးစဈမပွုတော့ဘဲ ဘုရငျလေးတို့တိုငျးပွညျနဲ့ မဟာမိတျပွုလိုကျပါတော့တယျ…အမတျကွီးနဲ့ စုနျးမကွီးတို့ရဲ့ မငျ်ဂလာပှဲဘယျလိုဖွဈသှားလဲ????
ဘုရငျလေးလဲ ပြောျရှှငျခွငျးနဲ့ ဝမျးနညျးခွငျးတှကေိုတပွိုငျနကျခံစားနရေပွီပေါ့….သိမျမှေ့ယဉျကြေးတဲ့သူငယျခငြျးနဲ့အလှနျမသတီစရာစုနျးမတို့ရဲ့ လကျတှဲရမယ့ျ ဘဝအရေးကို စဉျးစားမိလို့ပေါ့….အမတျကွီးလဲ ဆိုးရှားလှတဲ့ ဘဝကိုရငျဆိုငျဖို့မငျ်ဂလာအိပျခနျးတှငျးကို ဝငျသှားရပွီ…
ဒါပမေယ့ျ အိပျခနျးတှငျးမှာတော့ အလှနျလှပတဲ့အမြိုးအမီးလေးတယောကျ ထိုငျနတောကို တှေ့လိုကျရလို့ အရမျးအံ့သွသှားတာပေါ့…“ဘာတှဖွေဈကုနျပွီ လဲ မိနျးကလေးရေ“ လို့လှမျးမေးလိုကျတယျ….“သငျဟာကြှနျမနဲ့ ပထမဦးဆုံးတှေ့တဲ့အခြိနျမှာအလှနျမသတီစရာကောငျးတဲ့ ရုပျနဲ့တှေ့ပမေဲ့ ကွငျနာစှာ ဆကျဆံခဲ့တယျ…ဒီအတှကျကွောင့ျစိတျထားကောငျး တဲ့သင့ျကို အခှင့ျအရေးတခု ပေးခငြျပါတယျ….
ဒါကတော့ နေ့ဘကျ ဒါမှမဟုတျ ညဘကျ ရှငျကွိုကျတဲ့အခြိနျပိုငျးမှာ အခုလိုလှပမှေးပြံ့တဲ့ပုံစံနဲ့ တှေ့မွငျနိုငျအောငျ ဖနျဆငျးထားမယျလို့ဆုံးဖွတျထားပါတယျ…“လို့ပွနျပွောလိုကျပါတယျ။
ဘယျလောကျမြား ရကျစကျ နာကငြျစတေဲ့ မေးခှနျးပါလိမ့ျ…အမတျကွီးလဲသခြောစဉျးစားပွီး အဖွပေေးရတော့မယျ….နေ့ပိုငျးမှာ ခြောမောလှပတဲ့ မိနျးကလေး ကိုမိတျဆှတှေအေလညျမှာ ပွသပွီးညအခြိနျမှာစုနျးမကွီးနဲ့အတူတူအိပျမလား.ဒါမှမဟုတျ နေ့ပိုငျးမှာစုနျးမကွီးကိုပွသပွီး ကိုယျပိုငျအခြိနျဖွဈတဲ့ညအခြိနျမှာပြောျရှှငျဖှယျရာအခြိနျတှကေို ပိုငျဆိုငျမှာလား..???အမတျကွီးဘာရှေးလိုကျတယျဆိုတာကို ဆကျမဖတျသေးဘဲ
သငျကိုယျတိုငျဆိုရငျကောဘာကိုရှေးခယြျမှာလဲ………?????အမတျကွီးရှေးခယြျလိုကျတာကတော့“ မငျးသဘောအတိုငျးပါဘဲကှာ “အဲဒီစကားကိုကွားလိုကျတဲ့အခါ အမြိုးသမီးလေးကအောကျပါအတိုငျးကွငွော လိုကျပါတော့တယျ…..“အခြိနျတိုငျး လှပတဲ့ပုံစံနဲ့ ရှင့ျကိုမွငျတှေ့စခေငြျပါတယျ “ဘာကွောင့ျလဲဆိုတော့ သူမဘဝကိုသူမစိတျကွိုကျစီမံခှင့ျရရှိခဲ့လို့ပါ…
ပုံပွငျလေးရဲ့ အဓိက ဆိုလိုရငျးက ဘာလဲ….?????
သင့ျရဲ့ မိနျးကလေးဟာ သူတို့စိတျတိုငျးကြ သူတို့ဘဝကို စီမံခှင့ျမရခဲ့ရငျ………သင့ျအခွအေနဟောလဲနေ့ ဒါမှမဟုတျ ည ပိုငျးတှမှောမလှပနိုငျတော့ဘူးပေါ့နောျ။
တခါတုန်းက နိုင်ငံငယ်လေးတခုမှာ ငယ်ရွယ်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ ဘုရင်တပါးနန်းတက်ခဲ့တယ်……ထိုတိုင်းပြည်ရဲ့ အနီးအနားမှာ အလွန်အင်အားကြီးပြီးစစ်လိုလားတဲ့ ဘုရင်ကြီးတပါးရှိတယ်…..ထိုဘုရင်ကြီးဟာ တိုင်းပြည်ငယ်လေး ကိုသိမ်းပိုက်ချင်ပေမဲ့ဘုရင်ငယ်လေးရဲ့ ငယ်ရွယ်မှုနဲ့ ထက်မြက်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို သဘောကျလို့ အခွင့်အရေးတခုပေးလိုက်ပါတယ်…..အဲ့ဒီအခွင့် အရေးကတော့ အလွန်ခက်ခဲတဲ့ မေးခွန်းတခု မေးလိုက်တာပါ….
ဘုရင်ငယ်လေးအတွက် အချိန်တစ်နှစ်ပေးထားပြီးမဖြေနိုင်ပါက အသတ်ခံရမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်….
“လောကကြီးမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်း အလိုချင်ဆုံးအရာက ဘာလဲ “အဲဒီမေးခွန်းကတော့…ဘုရင်လေးနဲ့ ပညာရှိအမတ်တွေကို ခက်ခဲရှုပ်ထွေးစေ တော့တာပါဘဲ…..တချို့က မဖြစ်နိုင်တဲ့ မေးခွန်းလို့ထင်ကြတယ်……ဒါပေမယ့် အချိန်တစ်နှစ်ရဖို့အတွက် အဖြေရှာဖို့လက်ခံလိုက်ရတာပေါ့…..ဒါနဲ့ သူ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ မင်းညီမင်းသားတွေ၊ဘုန်းတော်ကြီးတွေ၊ ပညာရှိတွေ၊ တရားသူကြီးတွေ၊ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ ပြည့်တန်ဆာအမျိုးသမီးတွေပါမကျန် ဆင့်ခေါ်ပြီး အဖြေရဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်….
ဒါပေမဲ့ ••••ပြည့်စုံ ကျေနပ်ဖွယ်ရာ အဖြေတော့ မရခဲ့ပါဘူး….နောက်ဆုံးမှာတော့ လူအများစုက တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့စုန်းမအိုကြီး တယောက် သာလျှင် ဒီအဖြေကို ဖြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ လျှောက်တင်လိုက်ကြတယ်…..စုန်းမကြီးဟာ အလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အဖိုးအခကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတော့တယ်…
အဖြေပေးရမဲ့ နောက်ဆုံးရက်ဟာတဖြေးဖြေးနီးလာပါပြီ….စုန်းမကြီးဟာလဲ သူ့တောင်းဆိုချက်ကို အရင်လိုက်လျှောမှအဖြေပေးနိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်…တောင်းဆိုချက်ကတော့ ဘုရင်လေးရဲ့ ယုံကြည် အားအကိုး ရဆုံးသူငယ်ချင်း လဲဖြစ်၊ နိုင်ငံရဲ့ သူရဲကောင်းစစ်ဦးစီးလဲဖြစ်တဲ့ အမတ်ကြီးကိုလက်ထပ်ပေး ဖို့ပါဘဲ….ဘုရင်လေးလဲ အလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားနေတာပေါ့….
စုန်းမကြီးပုံစံက ခါးကုန်းကုန်း ကျောကုန်းဘုနှင့်အမြင်ဆိုးရွားလှတယ်….သွားကလဲ ရှေ့သွား တချောင်းထဲရှိတယ်…အနံ့အသက်ကလဲ ဆိုးရွားလှတယ်…စကားအပြောအဆို ကလဲ ကြမ်းတမ်း ညစ်ညမ်းလှတယ်….ထိုဆိုရွားလှတဲ့ စုန်းမကြီးနဲ့ နူးညံ့သိမ်မွေ့စိတ်သဘောကောင်းတဲ့ သူရဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ယူဖို့တိုက်တွန်းဖို့ရာမှာ သူ့အတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေတာပေါ့…ဒါပေမယ့် အမတ်ကြီးကတော့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအရေးနဲ့ ယှဉ်ရင်ဒီကိစ္စဟာ သူ့အတွက်အရေးမကြီးကြောင်း ပြောဆိုပြီး စုန်းမကြီးပြောတဲ့ အဆိုကိုလက်ခံပါ့မယ်လို့ ဘုရင်လေးကို လျှောက်တင်လိုက်ပါတယ်…
ဒီလိုနဲ့ မင်္ဂလာပွဲအစီအစဉ်ကိုကြေငြာလိုက်ပြီးဘုရင်လေးအတွက်အဖြေကို စုန်းမကြီးကပေးလိုက်ပါတော့တယ်..“လောကကြီးမှာရှိတဲ့ အမျိုးအမီးတိုင်းအမှန်တကယ် အလိုချင်ဆုံးအရာက ……သူတို့ရဲ့ ဘဝကိုသူတို့ စိတ်တိုင်းကျ စီမံခန့်ခွဲချင်တာပါဘဲ“
ထိုအခါမှ ပြည်သူတွေလဲ အဖြေကိုသိပြီးဘုရင်ကြီးကလည်းစစ်မပြုတော့ဘဲ ဘုရင်လေးတို့တိုင်းပြည်နဲ့ မဟာမိတ်ပြုလိုက်ပါတော့တယ်…အမတ်ကြီးနဲ့ စုန်းမကြီးတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ????
ဘုရင်လေးလဲ ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ ဝမ်းနည်းခြင်းတွေကိုတပြိုင်နက်ခံစားနေရပြီပေါ့….သိမ်မွေ့ယဉ်ကျေးတဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့အလွန်မသတီစရာစုန်းမတို့ရဲ့ လက်တွဲရမယ့် ဘဝအရေးကို စဉ်းစားမိလို့ပေါ့….အမတ်ကြီးလဲ ဆိုးရွားလှတဲ့ ဘဝကိုရင်ဆိုင်ဖို့မင်္ဂလာအိပ်ခန်းတွင်းကို ဝင်သွားရပြီ…
ဒါပေမယ့် အိပ်ခန်းတွင်းမှာတော့ အလွန်လှပတဲ့အမျိုးအမီးလေးတယောက် ထိုင်နေတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ အရမ်းအံ့သြသွားတာပေါ့…“ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ လဲ မိန်းကလေးရေ“ လို့လှမ်းမေးလိုက်တယ်….“သင်ဟာကျွန်မနဲ့ ပထမဦးဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာအလွန်မသတီစရာကောင်းတဲ့ ရုပ်နဲ့တွေ့ပေမဲ့ ကြင်နာစွာ ဆက်ဆံခဲ့တယ်…ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ထားကောင်း တဲ့သင့်ကို အခွင့်အရေးတခု ပေးချင်ပါတယ်….
ဒါကတော့ နေ့ဘက် ဒါမှမဟုတ် ညဘက် ရှင်ကြိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းမှာ အခုလိုလှပမွေးပျံ့တဲ့ပုံစံနဲ့ တွေ့မြင်နိုင်အောင် ဖန်ဆင်းထားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်…“လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်များ ရက်စက် နာကျင်စေတဲ့ မေးခွန်းပါလိမ့်…အမတ်ကြီးလဲသေချာစဉ်းစားပြီး အဖြေပေးရတော့မယ်….နေ့ပိုင်းမှာ ချောမောလှပတဲ့ မိန်းကလေး ကိုမိတ်ဆွေတွေအလည်မှာ ပြသပြီးညအချိန်မှာစုန်းမကြီးနဲ့အတူတူအိပ်မလား.ဒါမှမဟုတ် နေ့ပိုင်းမှာစုန်းမကြီးကိုပြသပြီး ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဖြစ်တဲ့ညအချိန်မှာပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအချိန်တွေကို ပိုင်ဆိုင်မှာလား..???အမတ်ကြီးဘာရွေးလိုက်တယ်ဆိုတာကို ဆက်မဖတ်သေးဘဲ
သင်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်ကောဘာကိုရွေးချယ်မှာလဲ………?????အမတ်ကြီးရွေးချယ်လိုက်တာကတော့“ မင်းသဘောအတိုင်းပါဘဲကွာ “အဲဒီစကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါ အမျိုးသမီးလေးကအောက်ပါအတိုင်းကြေငြာ လိုက်ပါတော့တယ်…..“အချိန်တိုင်း လှပတဲ့ပုံစံနဲ့ ရှင့်ကိုမြင်တွေ့စေချင်ပါတယ် “ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူမဘဝကိုသူမစိတ်ကြိုက်စီမံခွင့်ရရှိခဲ့လို့ပါ…
ပုံပြင်လေးရဲ့ အဓိက ဆိုလိုရင်းက ဘာလဲ….?????
သင့်ရဲ့ မိန်းကလေးဟာ သူတို့စိတ်တိုင်းကျ သူတို့ဘဝကို စီမံခွင့်မရခဲ့ရင်………သင့်အခြေအနေဟာလဲနေ့ ဒါမှမဟုတ် ည ပိုင်းတွေမှာမလှပနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။